ChiGerman, Germany IMPORTED DAMAT & MUROORI - GERMAN
IMPORTED chikomba & MUROORA
« : Ndira 29, 2015 na 02:57:26 pm »
Turkiyede akazotevera akaroora kubva pano (senge benım) hiçmi dambudziko risingaperi reshamwari izvo? Vanhu vakauya pano netariro yavo muhomwe. 85% yeavo vanouya havana mufaro uye vanoenda chero kwaunovatuma secheche ichangoberekwa sehove iri mumvura.
dambudziko remutauro, kusiyana kwetsika, vakaroorana vasingakwanise kunzwisisana nekufamba kwenguva, kusuwa kumba,
Uye zvakare, ivo vanhu vanobva kuTurkey mavambo pano, avo vatinofunga kuti isu tinoziva, vanotaura chaizvo kuti vazhinji vacho havana chekuita neTurkey (kunze kwekusiyana) vanogara vachiti nyika yangu, asi havana kana chando.
Dai Allah asarasa tariro kune chero munhu.
Re: IMPORTED Mukomba & MUROORA
« Reply #1: Musi waFebruary 11, 2015, 02:38:01 am »
« Reply #2: Kurume 02, 2015 pa10: 23: 11 pm »
Yakatorwa kubva ku: YAMANEFE - Ndira 29, 2015 na02: 57: 26 pm
Ini handidi kuti utore izvi pane zvandanyora. Vakaedza kuyambira dzimwe shamwari dzinogara pano, dziri muchikamu chekumirira vhiza kana vanotevera saiti kuti vaite chikumbiro, uyezve shamwari idzva idzo dzinouya nenzira senge kuti ndivo vaivayambira kuGerman uye havadi kugovera. Nekudaro, ivo chete chinhu chavanonamata kunyevera, kuyambira, kunyevera ... Iyi haisi iyo Alamna sekuiziva kwayo, zvachinja zvakanyanya, zvaireva kuti iwe hauite, saka unozozvidemba.
« Reply #3: Kurume 06, 2015 pa08: 45: 49 pm »
Pane zvakawanda zvekutaura nezve izvi. Ndataura vazhinji vacho. Ini ndinofunga zvakati siyanei. Ndokumbirawo kuti usatore chirevo changu kune chero munhu, ndinongoda kutaura zvimwe zvezviitiko zvandakaona nekuona. Ndiri kuda kwazvo muTurkey seGerman. Ehezve, mamiriro ehupenyu nenzanga dzakasiyana munyika mbiri idzi. Ini ndaigara ndichiti, ndiri kuzvitaura futi. Sezvakataurwa mune yapfuura yorumlarda, shamwari nyowani dzinouya kuGerman, dzichikunda 1-5 makore semari yakawanda muchipfuva vasingazive dzimba dzenyika muTurkey vanogamuchira vaeni vanofanirwa kudzima zvishuwo zvakasviba zvehuropi. Hapana zvakadaro ...
Muchokwadi, germany yenguva yemberi, nyika ino (Germany) iri kwazvo haisi mhosva yevakakonzera kutaridzika kwakanaka, kusiyana nevanhu vazhinji vanogara kuGerman, pavakauya kuzororo kuenda kuTurkey nendege nemataurirwo avakakanda nharaunda yavo, Ndiri kuona Germany semamiriro ezvinhu anomuka nekuda kwechiratidziro senge-isina kumbobvira yadzika ini. Ndichiri kuGerman, kutaura pamusoro pekuda nyika, germany germany, asi nzvimbo yavakaisa tsoka pasi sığdıramaz mudenga pavanosvika kuTurkey. Ehezve, ini handisi generalize nekuti ndanga ndine shamwari zhinji dzeTurkey dzinozviziva dzoga uye dzakadzidziswa kuGerman, asi sekuona kwandinoona, iyi ndiyo yakawanda. Ini handinzwisise kuti sei maTurkey akandikomberedza vanotaura zvakashata nezveruzhinji rweGerman vachiri kugara munyika yenzanga yavanoshoreka, kunyangwe ivo vachibatsirwa nemakomborero avo !!!! Pavakasvika kuTurkey pazororo, vanomira kutaura nekuti zvakaoma kugara muTurkey. Sezvo kana hupenyu hwavo kuGerman hwaive nyore. Ini ndinonyora chirevo changu semunhu akaona uye akagara muvanhu veTurkey vakandikomberedza, ini handibvise zvakadaro.
Chinhu chakanyanya kukosha chandinoda kutaura kune avo vari kuenda kuGerman ichi. Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita mushure mekuenda iwe kunzwisisa mutauro wechiGerman nesimba rako rese. Paunenge uchinge waziva mutauro, iwe unogona kuona kuti hupenyu hwako kuGerman hwave kureruka. Zvirinani kuti iwe unogona kukunda iyo Bhizinesi nyaya kana Wako mukadzi nyaya iyo inogona kumuka mune ramangwana. Mushure meizvozvo, zviri kumunhu. Nzira yemunhu wese ichave yakajeka, insha'Allah.
« Reply #4: Kurume 08, 2015 pa12: 32: 05 pm »
Ndiri kutora chikamu, shamwari yangu, iwe wakazvipfupisa kwazvo. Takanga takaipa patakaedza kuudza vanhu, asi ivo vakauya vakaona zvakaitika. Hapana chakasara kuti uuye kuGerman uye udzokere kumusha nekayellow mercedes mushure memakore maviri, kunyanya kune avo vasingataure mutauro uye vasina basa rinoshanda, zvakaoma kuwana chingwa chakaoma. Izvo zvinodikanwa kutsungirira zvimwe zvinhu kuti uve neiye waunoda. Sezvawataura, kudzidza mutauro ndicho chinhu chakakosha kuita kune vatsva. Zvakaoma kwazvo kuti munhu asina mutauro agare pano uye achinje. Mwari ngavazvipe kumoyo yemunhu wese, chero chinhu chakanaka pamusoro pedu ....
« Reply #5: Kurume 09, 2015, 10:30:17 am »
reyyan kuti Wakapfupisa nyaya yacho zvakanaka zvekuti ndinokukorokotedza. Ndine hama dzakawanda zvakare, kunyangwe mukadzi wangu nevana varipo. Mudzimai wangu anogara achitaura kuti haadi Germany, asi akaberekera vana ikoko uye akatovhiiwa ipapo, kunyangwe cheki yemachiremba. Kubva pano tevera zvidzikiso pane zvigadzirwa ipapo. Ini ndakatsamwa futi, sezvo iwe usingakwanise kurega zvakanyanya, ndinoti nei usipo, anotanga kundiudza nezverudo rwenyika nerudzi uye kupera kwekurwa kune ruzha. Kwete mukadzi wangu chete, asi hama dzangu dzese dzakadai. Isu tinokurukura nehama yangu Turkey anorumbidza heveslenip kumira. Ini ndinofanira kushanda nesimba, kuwana yakawanda uye kusevha yakawanda kuitira kuti nditenge mota yaanotasva. Asi kana zvasvika panzvimbo iyoyo, zvicharatidza nekuti ndichawana mihoro miviri ipapo. Ehe, mota dzinodhura kwazvo pano dzinouya neAudi mercedes, unogona kuchovha ipapo zviuru zvishanu zveeuros, kunyangwe nepeturu, zvakachipa zvikuru asi vanyunyuti havazive nei. Ini ndinofunga izvozvi zvinofanirwa kukumbundira munhu wese, kwete chete iyo Yekunze Turkey yachinja zvakanyanya. Izvo zvachinja zvakanyanya munyika. Hupfumi hwepasi rose hwachinja. fungidzira kuti munhu iyeye achinja, ongorora gore rapfuura uye gore rino, ndiwe mumwe chete mukati mako !!! Dai Ishe wangu abatsira munhu wese ...
« Reply #6: Chivabvu 11, 2015, 09:48:02 pm »
« Reply #7: Chikumi 07, 2015, 03:52:38 pm »
Zvakanaka, mataura zvese zvandichataura kwandiri, hama.
Vakafananidzwa maTurkey, iwe urikutaura chimwe chinhu kuvana, havanzwisise, vanhu vanotarisa joko rako sezvinhu, ivo vachataura chimwe chinhu, havagone kuchitsanangura mumutauro wavo, vanozvitaura nekusanganisa chiGerman,
Ndinogara ndichitaura izvi kubva zvandakauya
"Mamiriro ekunze ari kudziya kupfuura vanhu varipano" heino Germany Gardaş ndanga ndichiedza kujairira iyo kwemwedzi misere, asi haisi nzvimbo yekujairira, sekuziva kwako, mikistan isu tiri pano kutonyangarika,
munhu wese akarasikirwa ne0 kushivirira hunhu,
« Reply #8: Chikumi 08, 2015, 08:56:50 am »
Ini ndinofunga vanhu havazive kuti nei vakaenda kuGerman. Zvino, ndinotenda kuti vanhu vanofanirwa kuzvishandura pachavo mukuchinja mamiriro epasi. Munguva yakapfuura, hapana munhu akadzidza mutauro nekuda kwekuti isu taigona kushanda kwenguva pfupi uye kuyedza kujaira kune iyo mutemo weiyo ratio, saka maitiro nemamiriro zvaive zvakadaro. Ini ndinofunga zvingave zviri nani kushamwari dzinozoenda kuGerman panguva dzino kuti dzigadzirire kwekutanga, ikozvino zvave nyore kuwana vhiza, enda unozviona kutanga woti ndichazviita pano kana kwete ndosarudza. Ipapo anogona kutanga kudzidza mutauro. Iyo inokasira uye nekukurumidza iye anodzidza uye anoenda kune yake mukana. Hazvina musoro kuti uende upofu woti ndanga ndisingazive zvakadaro. Zvingave zvakanaka kuenda mushure mekutsvaga zvese nekuita pamwe nekushayikwa. Nekuti, kwete chete kuGerman, asi pasirese, hapana chakafanana sepakutanga, hapana chikonzero chekudzoka zvakanyanya, kunyangwe gore rapfuura uye gore rakatevera, zvinoita mutsauko wakawanda. Nekuti tekinoroji yakafambira mberi zvakanyanya, zvakadaro, shanduko yevanhu yakaitikawo nekukurumidza zvakanyanya. Zano rangu nderekuti kana iwe wave kuda kutora danho rakadai muhupenyu hwako, enda unozviona kare, uye kana iwe uchizvivimba iwe, hauzowana zviitiko zveshamwari dzinoenda uye dzive nedambudziko. Dai Ishe wangu ahupa kumoyo yemunhu wese ....
« Reply #9: Chikumi 14, 2015, 11:22:19 pm »
Ndiri kundiudza rairo yandakapihwa nemukoma mukuru anga aripo kwemakore makumi maviri pamberi pangu, yeshamwari dzichauya kuno kubva kumusha kwangu.
"Tanga wauya kuGerman, gara semushanyi kwemwedzi mitatu, wobva wauya woona kuti unogara pano here kana kwete"
Dai ndaive nebasa rakanaka uye mari yakanaka, handina basa kuGerman, ini ndichine nyika yakaita seruva,
« Reply #10: Chikumi 15, 2015, 12:32:24 am »
Ndakaenda kuGerman nemhuri yekusanganazve muna Chikunguru 2010. Mudzimai wangu Kindergarten basa Erzieherin di (Kindergarten Mudzidzisi) Kutanga zvaive zvakaoma pakutanga, asi pamusoro pemwedzi mitatu kana zvakadaro makosi muBusiness nePublic Administration yeTurkey akawana basa munzvimbo yakanaka yakatorwa neyakaenzana nediploma rangu. Ndakaita mari yakanaka mumakore matatu nekuti basa rangu raive rakanaka chose. Chipo ichi chakabva kuTurkey muna Zvita 3, takadzoka uye ndiri kuzvidemba zvikuru ikozvino ndadzoka kuTurkey. Neraki, ini ndichine mwedzi mishanu yekudzoka :) tichadzoka ...
Zvaive zvakaoma kuti ujairire kune waunowana, zvese zvaive chikonzero. Kuhwina mari zhinji vanhu vazhinji vari kudzokera kuTurkey sekureba sekunge munhu wepenjeni arasika.
Usati waenda kuGerman, unogona kuwana zvimwe zvakavanzika zvidzidzo muchiGerman kwemwedzi mitatu. Kana iwe uchida iyo mitatu mwedzi, iwe unogona kupedzisa hupenyu hwako hwemagariro uye mutauro wako uchave wakanaka.
Inoshanda chaizvo muChirungu, panoperera chiGerman, iri mhinduro hombe mumutauro wechipiri ..